HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliKocaeli အတွက်မိုဘိုင်းစခန်းများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုနိုင်ငံသားများ
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Karamursel Kocaeli, Gölcükနှင့်လမ်း Salim လမ်းDervişoğluဆဲလ်မှBaşiskeleခရိုင်နဲ့ D-100 အခြားရွေးချယ်စရာမှဦးဆောင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုပေါ်တွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့်အသွားအလာကိုပိုအရည်စေရန် pauses ။ ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခရီးသည်ပိုမှန်မှန်, Izmit Adnan Menderes အထက်ပိုင်းဂိတ်ဘေးကသစ်ကိုမိုဘိုင်းဘူတာရုံမှတည်ဆောက်ခဲ့ကနိုင်ငံသားတွေကျေနပ်မှုဖော်ပြနေကြသည်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ယူပါ။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မိုဘိုင်းဘူတာရုံ Mimar Sinan ၏ပထမဦးဆုံးအားဖြင့်သုံးတောသားစုစုပေါင်းဖြစ်နှင့် Turgut Ozal မြေပေါ်ဆဲလ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ပြည်သူ့အိမ် STOP မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု၏နိုင်ငံသားများ
အဆိုပါDervişoğlu Salim လမ်း Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ချဲ့ထွင်ရန်အဆင့်ကလမ်းပေါ်မှာအသစ်တစ်ခုကိုမိုဘိုင်းဖြင့်ခေတ္တတည်ဆောက်နေသည်။ လာမယ့်မိုဘိုင်းဘူတာရုံမြေပေါ် Adnan Menderes မှရပ်ရွာရေးစင်တာပြီးစီးခဲ့နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်။ အသစ်ကမိုဘိုင်းဖြင့်ခေတ္တBaşiskele, ရေအိုင်များနှင့် Karamursel အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်နှင့်အတူ, ခရီးသည်တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးလမ်းအတွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးဖို့အဆင်ပြေလမ်းအတွက်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့အသစ်ဆောက်လုပ်ထားမိုဘိုင်းဘူတာရုံနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားလည်းဖြစ်ကြသည်။ Mimar Sinan နှင့်မြေပေါ်တံတား၏ Turgut Ozal ၏အသင်းများအားဖြင့်ဖျော်ဖြေလှုပ်ရှားမှုများကိုများ၏နယ်ပယ်အတွင်းသိပ္ပံရေးရာအဆိုပါအိတ်ကပ်၏ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်။
"ငါတို့နောက်ထပ်မှန်မှန် SERVICE ကိုယူပို့ဆောင်ရေး"
Başiskeleကြောင့် Izmit အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် - မှတ်တိုင်များ Levent Karagöz (40) အကြားခရီးသွားလာနေစဉ်Başiskeleကွန်မြူနတီစင်တာကိုအသုံးပြုညွှန်ပြ "ယခင်ဘတ်စ်ကား၏အရပ်သားအစိုးရယာဉ်များကြောင့်ခေတ္တနားမှရပ်တန့်ခဲ့သည်ကိုရပ်တန့်။ ဒါကအသွားအလာယိုဖြစ်စေတဲ့ခဲ့သည်။ မိုဘိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၌အကြှနျုပျတို့၏မြူနီစီပယ်ဖို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုနှင့်အတူ, ဒီဒေသကပိုပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်ပိုပြီး်ဖြစ်လာသည်။ ဒီမှာအဓိကအသွားအလာဝင်ရိုးမဟုတ်ပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုယူနိုင်ရန်လေ့လာမှုများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
မိုဘိုင်းဘူတာရုံ Cevdet အဆိုပါရွှေ့ပြောင်း (74) "နယူးမိုဘိုင်းဘူတာရုံအငြိမ်းစားသူပထမဦးဆုံးသူတို့အသုံးပြုအချိန်နှင့်တူသောတကယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူကဒီမှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ၎င်းအသွားအလာမတော်တဆမှုရှောင်ရှား။ ဤလေ့လာမှု၌ကားများနှင့်ခရီးသည်တင်ယာဉ်များနှင့်အတူပိုအဆင်ပြေလာပြီအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုလမျး၌ပေါ်လာဖို့ပိုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတံတားအောက်မှဖြစ်အသုံးပြုလမ်းအလယ်၌ရပ်နေကြ၏ဆိုလိုသည်။ ဒါဟာယခုဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ခရီးသည်စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်။ ငါ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
နိုင်ငံသားများအတွက် Kadikoy-Kartal Metro ကနေပျော်ရွှင်မျက်နှာများရယ် 03 / 09 / 2012 ခရီးသည်ခရီးသွားအေးဂျင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို၏ဘဝအသက်တာ၌ - "Kartal Metro Kadikoy" Metro LINE ဝန်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်အားဖြင့်သြဂုတ်လအတွင်း 17 ရယ်မောရင်ဆိုင်နေရ၏ဖွင့်ပွဲလုပ်လေ၏။ သာ Kadikoy Kartal မက်ထရို Kaynarca သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး lounging လူအများ၏ Anatolian ခြမ်းချုပ်မြေအောက်ရထားခရီးသည်များ၏အမြင်များကိုလက်ခံရရှိ bekliyor.istanbul 32 မိနစ်ရောက်ရှိပြောနေကြပါတယ်ထံမှမြေအောက်အသွားအလာ Installing ။ ဤတွင်ခရီးသည် Kadikoy ၏မျက်စိ - Kartal Metro, Tevfik Eraslan (ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်) ငါသည်ငါ့ကလေးတွေနဲ့အတူအလွန်ဝမ်းသာတယ်ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းအတွက်ဖမ်းမိထားကြောင်း။ ငါကအခြားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးပြီးကြောင့်မိသားစုအသုံးပြုရန်အတွက် Tools များအတော်လေးသင့်လျော်ဘူး။ ငါကားရပ်နားတွေ့ရှိရန်သုံးဖြုန်းအချိန်တွင်ကားကိုအသုံး ...
နယူးတူရကီ YHT ဘူတာကျေနပ်ကျောက်ခဲတို့ကိုနိုင်ငံသားများအပြည့်အဝခဲ့ 01 / 11 / 2016 နယူးတူရကီ YHT ဘူတာနိုင်ငံသားများနှင့်ပြည့်၏ကျောက်စာပွစေ: နုပျိုသစ်တူရကီ YHT ဘူတာအဟောင်း, ကျောင်းသားများ, အရပ်ဘက်အစေခံကျွန်မြို့ပြ၏လူတန်းစားပေါင်းစုံကနေအတူတူဆောင်ခဲ့လေ၏။ နိုင်ငံသားတွေကသမ္မတအာဒိုဂန်ရဲ့ဧရာဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပွင့်လင်းခဲ့ဘူးဘယ်မှာတူရကီ YHT ဘူတာထဲမှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ပျံသန်းမှုစတင်ခဲ့သည်။ မြို့တော်တူရကီ YHT ဘူတာရဲ့ဗိသုကာတို့သည်အဝင်ခရီးသည်မှပေါများကြွယ်ဝကထပ်ပြောသည်, သူတို့ကသူတို့ကဝန်ဆောင်မှုစိတ်ကျေနပ်မှုကပြောသည်။ "အကြီးဆုံးစီမံကိန်းများအကြားတည်ရှိသော YHT ဘူတာရုံများအတွက်ကမ္ဘာ့Ankaralılar" ဤဘူတာရုံတူရကီအတွက်ခေတ်၏အဆုံး, "ဟုသူကပြောသည်ကြောင်း။ နိုင်ငံသားများနေ့စွဲသစ်ကိုဘူတာရုံBAŞKENTRAYနှင့်Keçiören Metro မှလွှဲပြောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်စေမည်အကြောင်း, တူရကီရထားဘူတာ, Ankaray ထိခြင်းမရှိဘဲတည်ဆောက်သည့်အခါအရှင်းလင်းအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါသည် ဒါ့အပြင်။ "အစားအစာဆိုတဲ့အချက်ကိုနှစ်သက် ...
စက်ဘီးစီးသစ်ကို cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်နေကြသည် 24 / 06 / 2014 စက်ဘီးစီးသစ်ကို cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်နေသောခေါင်းစဉ်: ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနောက်တဖန် operating အသစ်ကကေဘယ်လ်ကား, Uludag သွားရောက်ကြည့်ရှုချင်သောသူကဲ့သို့ကောင်းစွာ bisikletsever ကြပါတယ်။ နယူး cable ကိုကားတစ်စီးအဖြစ်အုပ်စုများ၏နိုင်ငံသားများစက်ဘီးများကပိုမိုနှစ်သက်သည်။ Teferrüçအတွက်တနင်္ဂနွေရဲ့အသက်ရှူအကဲဖြတ်ရန်လိုသူများအတွက်အားကစားအဖွဲ့များကိုလုပ်နေတာ။ အဆိုပါစက်ဘီးစီးဖို့ cable ကိုကားဖြင့် Uludag ယခုအဟောင်းဒုက္ခကျန်ကြွင်းသောဖျောပွမြှို့နယ်အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်ဘီးစီးအဖွဲ့များအနေဖြင့် 10 £ဝန်ပိုအဘို့အစက်ဘီး, စိတ်ကျေနပ်မှု "အဟောင်းကေဘယ်လ်ကား 40 လူတစ်ယောက်, ဒါမှမဟုတ်အချိန်မရွေးသည်အခြားကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုယူပြီးခံခဲ့ရသည်ကျွန်တော်နာရီဝက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်။ အခုတော့တစ်ကက်ဘိနက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကား, ဆိုင်ကယ်Sarıalanစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲစီးမှတက်နိုင်ပါတယ်" ...
ဘယ်လိုအမြင့်မြန်နှုန်းရထားနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုနိုင်ငံသားများ? 03 / 10 / 2012 အဆိုပါတူရကီ-Eskisehir တူရကီ-Konya နောက်ဆုံးပေါ် YHT ပြီးနောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရလဒ်များ၏အညီဖျော်ဖြေအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိရှေ့တော်၌ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မီးရထားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) နှင့်ရွှေခေတ်အသက်ရှင်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာတူရကီ-Konya လိုင်းအတွက်တူရကီ-Eskisehir YHT ပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထား။ အဆိုပါ Marmaray နှင့် Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်းများ၏ကော်မရှင်အပြီးတစ်နှစ်အတွက်တူရကီ-Sivas YHT လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်စီစဉ်ထားသည်။ တူရကီနှင့် Bursa-Izmir မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးစီးခဲ့သည်။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးအချိန်တွင်စတင်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရလဒ်များကို YHT အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါနောက်ဆုံးပေါ်ထင်မြင်ချက်ရွေးကောက်ပွဲထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ သုတေသန ...
နိုင်ငံသားများ YHT '' ဘယ်လိုပျော်ရွှင်? 07 / 10 / 2012 အဆိုပါတူရကီ-Eskisehir တူရကီ-Konya နောက်ဆုံးပေါ် YHT ပြီးနောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရလဒ်များ၏အညီဖျော်ဖြေအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိရှေ့တော်၌ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မီးရထားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) နှင့်ရွှေခေတ်အသက်ရှင်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာတူရကီ-Konya လိုင်းအတွက်တူရကီ-Eskisehir YHT ပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထား။ အဆိုပါ Marmaray နှင့် Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်းများ၏ကော်မရှင်အပြီးတစ်နှစ်အတွက်တူရကီ-Sivas YHT လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်စီစဉ်ထားသည်။ တူရကီနှင့် Bursa-Izmir မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးစီးခဲ့သည်။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးအချိန်တွင်စတင်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရလဒ်များကို YHT အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါနောက်ဆုံးပေါ်ထင်မြင်ချက်ရွေးကောက်ပွဲထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ သုတေသန ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အ Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ် drive ကိုအောက်တိုဘာလ92016 ...
နိုင်ငံသားများအတွက် Kadikoy-Kartal Metro ကနေပျော်ရွှင်မျက်နှာများရယ်
နယူးတူရကီ YHT ဘူတာကျေနပ်ကျောက်ခဲတို့ကိုနိုင်ငံသားများအပြည့်အဝခဲ့
စက်ဘီးစီးသစ်ကို cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်နေကြသည်
နိုင်ငံသားများ YHT '' ဘယ်လိုပျော်ရွှင်?
ခေါက်ခရီးသည်, စိတ်ကျေနပ်မှုမရအနေဖြင့်ရထားလမ်းဘတ်စ်ကား ''
Konya, အလေ့လာရေးခရီး၏ Eskisehir YHT ကျေနပ်မှုနိုင်ငံသားတွေကိုစတင်ခဲ့
နိုင်ငံများကျေနပ် Is အဆိုပါပုဂ္ဂလိကမီးရထား၏ရလဒ်အဖြစ်
လူတွေကပထမဦးဆုံး Kadikoy-Kartal Metro ကျေနပ်ကြုံနေရ